कांग्रेस सांसद तिमल्सिनाको प्रश्नः सरकारले दिने उखान टुक्काले पेट भरिन्छ? | पहिलो बोली
एकै दिन २७०७ संक्रमणमुक्त,९०७० जनामा संक्रमण ,५४ जनाको मृत्यु
शंकर पोखरेलको बहुमत गुम्यो, नेकपाका सांसद विमला वली माओवादीमा प्रवेश
कुल परिक्षण गरिएका मध्ये झन्डै ३८% लाई पोजेटिभ , २४ घण्टामा अहिले सम्मकै उच्च ५७६३ संक्रमित थपिए
कांग्रेस सांसद तिमल्सिनाको प्रश्नः सरकारले दिने उखान टुक्काले पेट भरिन्छ?
२०७७ जेष्ठ ३२, आईतबार (१० महिना अघि)
Published on: Sunday June 14, 2020 (11 months ago)
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारले कोरोना संक्रमणलाई लिएर चालेका कदमप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले भारतबाट फर्केका मानिसहरु २० दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्दा समेत पिसिआर परीक्षण हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै तिमल्सिनाले सरकारको खर्चमा विश्वास गर्न सकिने आधार नदेखिएको आरोप लगाए थिए । उनले भने, ‘सरकारले १० अर्ब खर्चको हिसाब देखाएको छ तर जिल्लामा कोरोना परीक्षण नभएर मानिसहरु २० दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका छन् । सो रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको हो विस्तृत सार्वजनिक हुनुपर्‍यो।’
सांसद तिमल्सिनाले मानिसको मृत्यु पनि किन पिसिआर परीक्षण हुन्छ भन्दै परिक्षणलाई तिव्र बनाउन माग गरे । उनले भने, ‘जिल्लामा परीक्षण हुन सकेको छैन। यत्रो पैसा कहाँ खर्च भएको छ । सत्ता पक्षका मानिसले पनि भन्नु होला नि कुनकुन क्षेत्रमा गएको छ।’
आफ्नो जिल्लाको उदाहरण दिदैं सांसद तिमल्सिनाले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएका छन् । क्वारेन्टाइनमा बसेका सबै मानिसको परिक्षण गरिन माग राखेका हुन् । उनले भने, ‘मेरो जिल्ला रौतहटमा खुला चौरमा मानिस २० दिनदेखि अलपत्र छन्। प्रधानमन्त्री नेपालीको इम्युनिटी पावर उच्च छ भनेर बस्नु भएको छ । मानिस खाना नपाएर भोकले मर्न लागिसकेका छन्। अहिले खेतीको समय छ तर मल पाइँदैन। बीउ पाइँदैन। सरकारले के दिन्छ? उखान टुक्का । उखान टुक्काले पेट भरिन्छ? प्रधानमन्त्रीले मल र बीउ मैले दिन्छु भन्नुपर्‍यो।’
#प्रतिनिधि सभा बैठक